Netizen Report: Mbola Eo Foana Ny Fanakatonana ny Aterineto Ao amin’ny Saikinosy Sinai ao Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2016 1:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, Ελληνικά, English
Hetsi-panoherana ny fanakatonana finday, ny taona 2014, tany Avaratr'i Sinai. Takelaka mivaky hoe: “Tsy te-hampiasa tambajotra Israeliana izahay noho ny tsy fitandremanareo.” Sary avy tamin'ny pejin'ny vondrona Sinai2014/SinaiOutofCoverage.
Neitizen Report-n'ny Global Voices Advocacy, manolotra ireo ampahanà fanamby, fandresena, ary ireo vaovao mipongatra erantany momba ny zon'ny Aterineto manerana ny tany.
Tamin'ny faran'ny herinandro 17 Septambra, nanohitra fanakatonana finday sy tolotra Aterineto izay naharitra farafahakeliny adiny valo ireo olon-tsotra tao amin'ny faritra ‘i Sinai an'i Ejipta. Nitatitra ny Al-Masry Al-Youm fa efa niverina ara-dalàna ny tolotra tany amin'ny ankamaroan'ireo faritra tao amin'ny faritany, fa kely ihany ny fanantenana hoe hijanona tsara foana ny fahazoana ireo tambajotra.
Ambany fanarahamaso matanjaky ny miaramila Ejyptiana ny faritra avaratry ny Saikinosy Sinai, izay manambatra an'i Israely sy ny ilan'i Gaza an'i Palestina, hatramin'ny tapatapaky ny taona 2013, fony izy ireo nanomboka nanamafy ny adin'izy ireo tamin'ireo vondrona mpikomy mahery fihetsika tao amin'ny faritra. Ny voalohandohan'ny taona 2014, efa ho mandritra ny andro tontolo mihitsy ireo fahatapahana matetiky ny fifandraisandavitra, izay toa miseho ho ezaka hibahanana ireo mpikomy tsy ho afaka hifampiresaka. Niantraika tamin'ny olompirenena ny vokadratsy natrak'io teo amin'ny andaniny sy ny ankilany, mahatonga azy ireo tsy afaka nifandray, tsy afaka nifampiresaka tamin'ireo havany akaiky, tsy afaka nandefa sy naharay loharanom-baovao sy vola, ankoatra ireo zavatra hafa maro. Nikarakara hetsi-panoherana an'ireo fanapahana tamin'ny fotoana maro ireo olon-tsotra, fa kely ihany ny vokatra azo. Iireo fahatapahana dia nanamafy ihany koa ny fisian'ny famerana ireo media teo amin'ny faritra izay lasa sazy mafy ho an'ireo mpanao gazety mitady hanangom-baovao momba ireo hetsiky ny miaramila any amin'ilay faritra.
Ny volana Desambra 2015, tao amin'ny TIME Magazina, nosoritsoritan'i Ramy Raoof, Ejiptiana mpanoratry ny Global Voices no sady teknolojista, ny fomba “tsy manavaka” nataon'ireo manampahefana momba ny fiarovana nanapahana ny fahazoana ny Aterineto, nomarihiany fa tsy nanao ezaka mihitsy izy ireo mba hitazonana ireo tolotra fototra na ireo tolotra fiatrehana ny vonjy maika, toy ny fahafahana miantso ny “ambulance”. Ary rehefa tapaka ireo tambajotra ireo, afaka mampiasa ireo fitaovana hafa tsy voabahana ihany ireo mpikomy, toy ireo fitaovana fifandraisana ampiasàna ny “roaming” an'ireo tambajotra finday ary satelita avy any ivelany (manana foibe indrindra ao Isiraely). Toy ireo hafa maro, ny anyony aroson'i Raoof: “Tsy manakana ireo olon-dratsy tsy hanao zava-dratsy akory io.”
Fianakavinan'ny mpanjakan'i Koety miatrika sazy an-tranomaizina noho ny fanalàna baraka ny “émir” tamin'ny Snapchat
Nanameloka an'i Sheikh Abdullah Salem Al Sabah ho nanala baràka ny fianakavian'ny mpanjaka ny fitsaràna iray ao Koety, na dia hoe zanaky ny iray tampo amin'ny “émir” ihany aza izy. Nosaziana telo taona an-tranomaizina izy ary nodidiana handoa onitra 16.500 dolara Amerikana noho ny nandefasany hafatra Snapchat izay nitsikeràny ny kabinetra fototra, izay ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka daholo (sy ny azy) no mibahan-toerana ao.
Rosiana mpitoraka bilaogy nomelohana ho nandefa ‘fanambaràna mahery fihetsika’ mikasika an'i Syria
Nampiantso ny mpitoraka bilaogy mpanohitra, Anton Nossik, ho helohina roa taona an-tranomaizina ireo mpampanoa lalàna Rosiana, noho ny fnandefasany “fanambaràna mahery fihetsika” tao amin'ny Aterineto. Fiampangàna niainga avy taminà lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Fafao Eto Ambonin'ny Tany i Syria” ireo , izay niantsoan'i Nossik ny hidarohana baomba ny firenena manontolo, tafiditra amin'izany ny faritra fehezin'ny governemanta Syriana — fenehoana fanoherana ny fitondran'i Assad. Navoaka andro vitsy mialoha ny nanombohan'ny governemanta Rosiana ny hetsika zera baomba ho fanohanana ny fitondran'ny governemanta Assad ilay lahatsoratra. Vonona ny ho tononina ny 3 Oktobra ny didim-pitsaràna an'i Nossik.
Nahoana i UAE no tsy nanana ‘Lohataona Arabo’?
Na tsy dia misy aza ireo hetsi-panoheran'ny governemanta, zavatra mandeha ho azy sy fahita matetika ny hery famoretana any UAE izay tohanan'ny fanjakana: fisamborana, fanjavonana an-tery, fampijaliana, fitsaràna mitanila, famerenana amin'ny tany niaviana ary fandavana ny maha-olom-pirenena, samy tetikady ampiasaina mba hampanginana ireo mpanohitra ao amin'ny firenena daholo ireo. Na eo aza ny fieboeboan'ireo mpitondra ao UAE ny amin'ny fari-piainana ambonin'ireo olom-pirenena, “hatreto aloha… hita ho tsy migoka ireo hafaliana, fiainana tsara ary fandriampahalemana atolotry ny Emirates ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpitsikera ny governemanta,” hoy ny nosoratan'i Afef Abrougui avy ato amin'ny Global Voices.
Fikarohana vaovao manazava ny sivana ara-politika ao Bahrein
Mampiasa rindrambaiko fanivanana Aterineto antsoina hoe Netsweeper i Bahrein mba hanivanana ireo votoaty ara-politika, tafiditra amin'izany ireo pejy mikasika ireo zon'olombelona,ny mpanohitra politika, vohikala Shiita, loharanom-baovao eo an-toerana sy any amin'ny faritra ary votoaty manakiana fivavahana, araka ny fikarohana vaovao nataon'ny Citizen Lab an'ny Anjerimanontolon'iToronto. Hitan’ ireo mpikaroka ao amin'ny Citizen Lab fa ampiasaina amin'ireo ISPs sivy ao Bahrein ilay rindrambaiko, nandritra ny fahavaratry ny taona 2016. Nofehezin'ilay tatitra hoe: “Mahatonga fametraham-panontaniana be mikasika ny fandraisana andraikitra sosialin'ny orinasa Netsweeper ny fivarotana teknolojia ampiasaina hanivanana ireo resaka ara-politika sy ireo endrika hafanà fitenenana ara-dalàna, ao aminà fanjakana manana olana be mikasika ny resaka zon'olombelona.”
Mieritreritra fiainana tsy misy vetaveta amin'ny Aterineto ireo Rosiana
Nibahana vohikala vetaveta roa lehibe ireo manampahefana Rosiana tamin'ity herinandro ity, Tafiditra amin'izany ny PornHub sy ny YouPorn, tamin'ny fampidirana ireo vohikala ireo ho ao anatin'ny lisitra maintin'ny firenena. Nikendry ireo tolotra mpandefa vetaveta ny sivan'ny Rosiana taloha, fa avy eo nametra ny fibahanana amin'ireo vohikala mipetraka ao Rosia. Io ny voalohany nitakiana tamin'ireo ISPs hibahana ireo dika manontolon'ireo vohikala. Notarihin'ireo mpanao gazety maromaro, namaly ilay fibahanana taminà fiaraha-mientana ao amin'ny Aterineto ireo Rosiana mpampiasa Aterineto, izay niaraka nanao hetsika tsealatra naka lahatsary ny tenany eo am-pijerena lahatsary vetaveta ary mitantara ny zavatra hitany.
Mihoatra noho ny olon-kafa, mandondona ao ambaravaran'ny Twitter i Etazonia
Asehon'ny tatitra farany momba ny mangarahara avy amin'ny Twitter fa nanao fangatahana bebe kokoa ny governemanta Amerikana mba hahazo ny angon-drakitra manokan'ireo mpampiasa raha oharina amin'ny governemanta hafa — ary amin'ny ankapobeny, nitombo 2,1 isan-jato ny isan'ireo fangatahan'ny governemanta, mahakasika fitomboana 8 isan-jato bebe kokoa amin'ireo kaontin'ny mpampiasa. Ao amin'io tatitra io, namboraka andinindininy bebe kokoa amin'ny hoe iza no manao ireo fangatahana ireo avy ao Amerika ny Twitter. Nolazain'ilay orinasa fa ny FBI, Sampana Miafina ary ny biraon'ny Mpampanoa Lalànan'ny Distrikam-panjakan'i New York no tena mpangataka ireo mombamomba ny kaonty.
Mankalaza ny emojis vaovao ireo mpikatroka mafana fo miteny fiteny indizena Amerikàna Latina
Nihoatra ny lokon-koditra ny antso hisian'ny emojis maro karazana bebe kokoa mba hampidirana fanehoana maro samihafa ara-kolontsaina misimisy kokoa, hoy i Eddie Avila ato amin'ny GV. Ho fanampin'ny fanangonantsonia natao vao haingana mba hampidirana ny hijab emoji, nanomboka namorona ireo emojis azy manokana ireo mpikatroka mafana fo miteny indizena ao Meksika sy Shily, izay maneho ny akanjo nentimpaharazana sy ireo fomba fiteny amin'ireo teny, tafiditra amin'izany ny Huastec, tenenina betsaka any amin'ireo Mayana ao Meksika afovoany, sy ny Mapudungun, tenenin'ireo Mapuche an'i Shily.
Arahabaina Tratran'ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko!
Manamarika ny Andron'ny Fahalalahan'ny Rindrambaiko ny 17 Septambra, fankalazàna maneran-tany ny fampiasàna ny rindrambaiko malalaka sy manana loharano misokatra. Mba hanamarika ny fotoana, nifamory tany amin'ireo tanàna maneran-tany ireo mpankafy rindrambaiko malalaka sy manana loharano misokatra, mba hanatanteraka fiarahamiasan'ireo mpikirakira informatika, nanao toby fametrahana rindrambaiko kirain amaimaimpoana, ary nampianatra olona momba ny fampiasàna azy.
Fikarohana Vaovao (rohy amin'ny teny Anglisy avokoa)
Fahanginana Mampitahotra: Ny Hafanàna eo amin'ny Habaky ny Sarababem-bahoaka ao India – PEN International
Fanarahamaso 2.0 ny Loharanom-baovao: Mamolaka ny Aterineto ny Sampan-draharaha misahana ny Sehatry ny Aterineton'i Shina – Mercator Institute for China Studies
Mpanaraka Voamarina, Tandindonin-doza Ireo Zo: Fanamarinana ny Netsweeper any Bahrein – Citizen Lab
Fandriho amin'ny Imailaka ny Netizen Report
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Weiping Li sy Sarah Myers West.